Saribakoly mora voninkazo Mety tsara raha mikasika ny zaridainantsika. | Asa tanana
Saribakoly potika voninkazo mora
Jenny monge | 16/07/2021 12:27 | Decor, asa-tanana, Asa tanana an-trano
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba fanaovana an'io saribakoly io amin'ny vilany voninkazo. Ity dia fomba mahafinaritra iray hamelomana ny zaridainantsika na ny lavarangana.
Te hahafantatra ny fomba anaovanao ity saribakoly tsotra ity ve ianao?
1 Fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny saribakoly vilany voninkazo
Fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny saribakoly vilany voninkazo
Vilany misy habe roa. Vilany lehibe roa mitovy amin'ny vatana sy loha. Vilany kely efatra mitovy amin'ny tanana sy tongotra. Tokony ho poty tanimanga tsy malama izy ireo.
Lokoy ny loko izay ilainay mba hanaovan'ireo saribakoly. Raha ny aminay dia nifidy loko manga roa sy fotsy koa izahay.
Fanamarihana maharitra mainty sy mena ho an'ny antsipirian'ny tarehy.
Ny dingana voalohany dia manaova sarisary amin'ny toerana itiavantsika ireo faritra samihafa nolokoina tamin'ny saribakolinay. Azontsika atao koa ny manisy marika amin'ny pensilihazo izay alehan'ny maso sy ny vava. Tokony hotadidintsika fa ny kapoka pensilihazo dia tsy maintsy vahana mba hamafana azy na handrakotra azy amin'ny loko fa tsy tsikaritra.
Vantany vao nanondro ireo faritra izay hodorainay, hanomboka handoko isika. Ao anaty vilany no hanaovantsika ny maso, ny vava ary ny orona. Afaka manampy antsipiriany bebe kokoa isika raha tiantsika. Hampiasa ny marika izahay hanamboarana ny tarehy ary koa loko fotsy kely ho an'ny maso.
Miaraka amin'ny loko voafantina, raha ho hitantsika ny manga sy ny fotsy, dia handoko ny akanjon'ilay saribakoly isika. Hanomboka amin'ny fandokoana ireo faritra mety ho fotsy isika. Tsy mila mazava loatra isika amin'izao fotoana izao satria azontsika atao ny manarona ireo faritra fotsy amin'ny loko manga fa te-hanao ny fampiatoana ireo dungaree jean izahay.
Manampy ny antsipiriany izahay toy ny paosy manga manga, ny zaitra misy marika mainty ary taratasy eo am-paosy koa misy marika.
Mandoko ny vilany kely izahay amin'ny loko voafidy manao antsipiriany ny kofehy izay handehanany amin'ny tongotra.
Mifarana atambatra ny vilany rehetra. Mamakivaky ny lohan'ny tongotra isika ary manamboatra fatotra mba hanamboarana azy. Izahay dia mamakivaky ny lavaka ao amin'ny vilan'ny vatan-dehilahy ary mifatotra amin'ny vilany misy azy ny tsirairay.
farany lakaoly ny vilany izay mivadika ambony ambany izahay miaraka amin'ny lakaoly matanjaka toy ny silicone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Saribakoly potika voninkazo mora
Origami mora 9 hanombohana